Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hong Kong » Booqo Hong Kong si aad u ilaaliso Qoob -ka -ciyaarka Jellyfish
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Hong Kong • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Maaddaama Hong Kong ay tahay meesha ugu horreysa ee waayo-aragnimada bad-maaxadda, Cube O Discovery Park ma aha oo kaliya inay soo bandhigto adduunka biyaha hoostiisa iyo nolosha badda hab cusub, laakiin waxay kaloo si xeeladaysan ugu soo koobtaa bad-weynta meel bannaan oo xaddidan oo badda u soo dhoweysa gacanta oo isku xirta. booqdayaasha dabeecadaha siyaabo cusub oo madadaalo leh.
Daboolida aag ka badan 10,000 fuudh, Cube O Discovery Park waxay ka dhex muuqan doontaa isku -darka bandhigyada nolosha badda ee dhabta ah iyo ciyaaraha is -dhexgalka badan ee xiisaha leh, oo ay weheliyaan noocyo kala duwan oo madadaalo, waxbarasho iyo fursado cunto.
Ku habboon booqashooyinka qoyska iyo sawirrada sawirrada warbaahinta bulshada, Cube O wuxuu ku yaal suuqa weyn ee Plaza 88 ee Tsuen Wan waana meesha ugu horreysa ee khibradda badda ee Hong Kong ee bartamaha magaalada.
Cube O waa mashruucii ugu horreeyay ee ka socda Hong Kong ee ka socda Cube Oceanarium - oo ah sumcadda quraaradda adduunka caan ka ah - waana natiijada iskaashi guul leh oo dhex maray naqshadeeye sare oo aquarium ah, koox hawlgal ah oo ku takhasusay hawo -biyoodka, la -taliye sare oo xagga ilaalinta badda ah iyo la -taliye farsamo oo ayaa ku guuleystay laba Abaalmarin oo Saamaynta Muuqaalka ugu Fiican ee Abaalmarinta Filimka Hong Kong.
Markaad booqaneyso Hong Kong mar kale dib u furitaanka, Cube O waa inuu ku jiraa liiska baaldigaaga
Fikradda ka dambeysa Cube O waa in la abuuro khibrad badeed oo u gaar ah oo ku jirta adduunka biyaha hoostiisa iyo nolosha badda ee dhabta ah, oo ay weheliso saamaynta warbaahinno is -dhexgal leh, si kor loogu qaado farriinta ilaalinta badda
Waayo -aragnimada badda ee qoyska oo dhan
Cube O wuxuu u qaybsan yahay dhowr aag oo mowduuc leh oo leh soo jiidasho kala duwan oo ay ku jiraan saadaasha daaqadda akril -ka ugu horreysa ee Hong Kong. Tani waxay midaynaysaa aragtida nolosha badda ee dhabta ah oo leh saadaasha iftiinka iyo hooska. Tusaale ahaan, jellyfish waxaa lagu muujiyey kaleidoscope oo midabyo ah, halka Xaqiiqda Virtual (VR) ay martida ku qaadato safarka badda moolka dheer.
Waxa kale oo jira fasalka jellyfish Mixed Reality (MR), meel lagu ciyaaro carruurta, iyo aag wax lagu cuno. Khibradahaas xiisaha leh waxay bixiyaan maalin ku habboon qoyska, iyo goob Instagrammable-ka ugu fiican oo loogu talagalay dhalinyarada.
Daah -furka dhul -weynaha
Iyada oo la isku darayo nolosha badda ee dhabta ah iftiinka farshaxanka iyo saamaynta hooska oo u beddelaya jellyfish -ka caadiga ah bandhig xumbada midabka leh, Cube O wuxuu rajaynayaa inuu dadka ku sixro haybadda badda. Jellyfish -ka qoob -ka -ciyaarka ahi wuxuu u muuqdaa inay ku hawlan yihiin ballet -ka badda hoosteeda waxayna u sameeyaan fursado sawir aan caadi ahayn booqdayaasha.
Farsamada isgaarsiinta ee is -dhexgalka ayaa sidoo kale u oggolaan doonta booqdayaasha inay dhowraan nolosha badda si ay wax badan uga bartaan dabeecadda, ilaalinta deegaanka, iyo qaababka waara ee nolosha. Saamaynta muuqaalka cajiibka ah waxay abuuri doontaa dareenka ah in la geeyo dhul -weynaha badweynta oo ay ka buuxaan aragtiyo yaab leh.
Kaleidoscope -ka ah meelaha khiyaaliga ah ee aan dhammaadka lahayn
Kalidoscope -ka jellyfish wuxuu si xeeladaysan isugu daraa sawirrada jellyfish -ka dhabta ah, oo leh dhalanteed hooska muraayadda, halka nalalka midabka leh ay ka tarjumayaan hooska jellyfish oo aan tiro lahayn dhinac walba. Tani waxay abuurtaa meel aan qarsoonayn oo dahsoon oo ay booqdayaashu dareemi doonaan inay gebi ahaanba ku dhex milmeen.
Intaas ka dib, booqdayaashu waxay booqan karaan machadka cilmi -baarista jellyfish waxayna baran karaan sida jellyfish uga koraan dhallaanka ilaa dadka waaweyn oo ay wax badan uga ogaadaan cilmiga deegaanka jellyfish iyo astaamaha noocyada jellyfish ee kala duwan. Ka sokow daawashada quudinta jellyfish, booqdayaasha ayaa sidoo kale loo oggolaan doonaa inay kala soo xiriiraan meel eber ah oo ammaan ah sidaasna ugu soo dhowaadaan badda.
Wax -ka -beddelka Multimedia
Ciyaaraha isgaarsiinta badan ee is -dhexgalka ayaa sii kordhin doona waayo -aragnimada guud, maaddaama booqdayaashu ay "noqon karaan" kalluun yaryar, iyagoo ku dabaalanaya ilaalinta jellyfish ee sahaminta sahaminta badda. “Kalluunka yar” waa inuu ku dhuuntaa jellyfish hoostiisa isagoo ka digtoon in la qabsado taanbuugyo ama ay soo weeraraan ugaadhsatada dhuumanaya meel u dhow.
Fasalka MR jellyfish, booqdayaashu waxay noqon karaan "ilaaliyaasha badda" waxayna badbaadin karaan qoolleyda cagaaran ee go'doonsan, taas oo u baahan daaweyn taxaddar leh iyo dadaal badan si looga caawiyo qoolleyda inay soo kabsato oo dib ugu dabaalato badda.
Hawlgalka samatabbixintu wuxuu daba socdaa hababka samatabbixinta qoolleyda dhabta ah. Soo -booqdayaasha ka -qaybgalayaashu waxay awoodi doonaan inay wax ka bartaan shaqada xirfadleyda ilaaliyayaasha xirfadda leh, waxay ka fekeraan saamaynta bini -aadamku ku leeyahay badda, waxayna heli doonaan dareen hawlgal marka la eego ilaalinta badda.
Qoyska mowqifka badweynta guriga ciyaarta iyo shan xiddigood oo la cuno
Guriga Ciyaalka ee Carruurtu wuxuu ka kooban yahay Hong Kong goobtii ugu horraysay ee badweynta lagu ciyaaro oo ay carruurtu ka heli karaan aqoonta badda halka ay ku baashaalayaan hanashada caqabadaha jireed.
Darbiyada Playhouse-ka waxaa lagu rinjiyeeyay rinji u fiican ilmaha si loo abuuro jawi nadiif ah oo caafimaad leh, si waalidiintu ay ugu cunaan cunno wanaagsan oo u dhow iyagoo leh nabdoonaan maskaxeed.
Beerta ayaa ku casuuntay Madaxa Chef iyo kooxdiis huteel shan-xiddigle ah oo maxalli ah si ay u diyaariyaan xulashada cuntooyinka macaan ee afka laga qariyo. Intaa waxaa dheer, Corn Cone, oo ah astaanta jalaatada caanka ah ee Aasiya, waxay u diyaarisay jalaato kooban oo jaakado leh oo gaar ahaan loogu talagalay Cube O.
Cube O waxay ujeedadeedu tahay inay ku dhiirrigeliso dad badan inay ixtiraamaan oo ilaaliyaan dadka ku nool badda oo ay ku lug yeeshaan ilaalinta badda, iyagoo ku raaxeysanaya kuna bogaadinaya aragtida quruxda badan ee nolosha badda, u fiirsashada sifooyinkooda, iyo inay maskax ahaan ku galaan adduunka biyaha hoostooda maraya iyada oo loo marayo noocyo kala duwan ciyaaraha.
Cube O waxaa loogu talagalay inay noqoto meel loogu talagalay madadaalada, nasashada, iyo waxbarashada shaqsiyaadka iyo qoysaska, iyo sidoo kale kooxaha iskuulka oo ogaan kara kala duwanaanshaha nolosha badda dhexdeeda iyada oo loo marayo dhacdooyin is dhexgal ah
n 2021, waxaa loo liis gareeyay 5th aquarium -ka ugu fiican adduunka websaydhka Darajaynta Magaalooyinka Adduunka oo galay kaalinta 16th xulashada 50 -ka biyo -biyood ee ugu fiican websaydhka Dalxiiska Dalxiiska.